FastCAD, hooskii AutoCAD - Geofumadas
FastCAD, hooska AutoCAD
Mee, 2011 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, IntelliCAD
Haddii aysan waligood maqlin FastCAD ... waa inay ahaadaan.
Waan ogsoonahay, waa markii ugu horeysay ee ay ogaadaan in barnaamijkani jiro, laakiin waxaan rabaa in aan qaato waqti ka baxsan habeenkaas jimicsiga leh Oreo cookies si ay u muujiso aalad ka mid ah wax aan ku baran karno xitaa cutubka ugu dambeeya.
Sababtoo ah FastCAD waa muhiim
Waa hagaag, abuuraha FastCAD waa kan ka soo baxay INTERACT, barnaamijkaas oo ahaa prototype iibsaday by aasaasayaasha of AutoDesk si ay u bilaabaan AutoCAD.
Si kastaba ha ahaatee, ka baxsan niyadda u culus oo ah saaxiibkay norteamericadno, barnaamijkan qaar ka mid ah mudnaanta muhiim sagaashankii hore kasbadeen, Halxidhkii ayaa sidoo kale loo magacaabay for Engineer Design News of the Year ee 1992 iyo 1999 Engeneering News-record waxaa ka mid ah in ay Top125 ka mid ah dadka ugu saameynta badan in industry dhismaha sanadihii ugu dambeeyey 125.
Markaas ayuu aasaasay Heshiiska Evolution in 1985 uu bilowday qaabkiisii ​​ugu horreeyay ee FastCAD, dabcan loogu talagalay DOS.
In 1987 version waxaa ku jiray "cadaadi" badhanka, calaamadaha iyo sanduuqyada wada xiriirka ka hor intaanay sameyn -ama jiray - Windows.
Sidoo kale wakhtigaas hore ayaan lahaa qorshe hawleed oo leh maareynta qaabaynta, ka hor doorasho ah waxa ka dhacay AutoCAD on waraaqaha.
Xogta ugu dambeysa ee FastCAD waa 7.56, oo isbeddeladii ugu dambeeyay ay bilaabmeen sanadka 2007 oo ku lug leh tallaabada 32 ee qaabka loo yaqaan 'XNUMX'.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan FastCAD. Laga soo bilaabo bilawgii, ixtiraamtayda Riddle ee ku saabsan fikradda cusub iyada oo ku xiran waxa ay isticmaalaan. Waxaan tijaabiyay wakhti fiican wiigga iyo inkasta oo ay tahay software ah oo la bilaabay sannadkii hore 10 waxaa la yaabay qaybo ka mid ah waxqabadka lagu qarsado halkaas; in kasta oo aan aqbalo in barashada isticmaalka badan oo ka mid ah waxqabadyada ay ka dhigan tahay isbedelka habka wax loo qabanayo barnaamijyada aan isticmaalnay. Inkasta oo aan u maleynayo in barnaamijkani uu horey u siiyay waxa uu u baahan yahay, mareegta hadda jirta, waxaa habboon in la ogaado waxa uu sameeyay fikrad wanaagsan; yaa og in haddii barnaamijyada tartanka tartamaya ay isha ku hayaan.
Akhri qaababka dwg ilaa qaabka ugu dambeeyay (2010 oo ah midka loo isticmaalo AutoCAD 2012). Nooca FastCAD waa fcw, laakiin waad furi kartaa oo u kaydin kartaa qaababka dwg ka soo R12 ilaa 2010).
Akhri Microstation DGN V8, tan iyo kor ku xusan waxay leeyihiin xaddidaadooda barnaamijyo badan lacag bixinta iyo furfuran (waxaan fahamsanahay sababta, laakiin aan eegno sida uu Riddle u sameeyay.
Waxay leedahay qaab isku mid ah ikhtiyaarka ah in lagu daro aragti firfircoon ( cusbooneysiinta Autocad 2012 iyo Bentley V8i), oo leh badhano badan oo wax ku ool ah intii lagu dhejin lahaa fursadaha aragtida ee Microstation. Khiyaamooyinka si ay udhaqaajiyaan zoom-ka u dhexeeya daaqadaha waa mid aad u wanaagsan, sababtoo ah boodhka kumbuyuutarka iyadoo ku xiran fureka aan ku cadaadin karno dhexdhexaad ah, firfircooni, u rogo qulqulo kala duwan ama isbedel; Maareynta Maababka Maareyntu waa mid aad uwanaagsan oo ah qalabyada FastCAD kala duwan.
Kuwa ugu fiican, shaqada dhexdhexaadinta leh faylasha. Marka laga reebo fikradaha la keydiyay waxaa ka mid ah gaabanaanta faylasha faylasha waxayna leedahay doorasho loo yaqaan tixraacyada faylasha qarsoodiga ah, sida xref, laakiin leh ikhtiyaarka ah in ay ku duubaan on duulimaadka (xref ayaa la akhriyaa oo kaliya) iyo xitaa leh hawlgal ah loo yaqaan qayb taas oo suurtogal ah in la abuuro ururo walxaha iyo nidaamyada xitaa haddii ay ku jiraan faylal kala duwan, kuwani waxay qayb ahaan ka dhigi karaan dibadda. Awesome.
Jaantuska miisaska waa raaxo, sababtoo ah waxay yihiin kuwo firfircoon. Qaybta madaxbannaan ayaa la abuuri karaa, oo ay ku jiraan soo dejinta xogta laga soo qaaday excel (csv) ama faylka txt. Marka faylka uu noqdo dwg wuxuu lumiyaa firfircoonaanta, sababtoo ah waxaa loo adeegsadaa.
Waxaa jira qalab wadada -Waxaa ka mid ah waxyaabo kale-wuxuu abuuraa derbiyo, oo la mid ah badan, oo leh nooc kala duwan oo ah shey aan firfircoonayn, oo markaa lagu daro derbiyada waxa ay si toos ah u abuureysaa ururo (iyada oo aanad isticmaalin nasasho, jarjar iyo khaanado kale), waxaad ka bixi kartaa sawirada iyo isbeddelka wadiiqooyinka derbiyada iyadoon la leexin amarka, marka lagu daro waxaad geli kartaa jarista albaabbada albaabada waxayna ku dhammaaneysaa dhammaadka darbiga. Lakin leh wax la taaban karo popmenu, in loo gudbiyo 3D waa arrin la yiraahdo, waxay u muuqataa mid sahlan.
Waxaa kaloo jira dhowr wax interface heerka arrin wax ku ool ah sida midabka bar bidixda in style CorelDraw ah, kaliya riix combobox kor ku xusan si aad u aragto waxa xaaladaha ka shaqaynayaan, nooca line, isuduwaha, oo dhumucdiisuna waxay, lakabka, iwm Waxaan u arkaa in ay interface user aad u sahlan, si aad u wanaagsan loo qaybiyey, oo aan toolbars iyo darfihiisuba dhamaadka badan oo u muuqdaan in ay xamili maktabadaha block cusub (cells).
Miyuu qaar ka mid ah wax fudud in tartanka uu ahaa mid gaabis ah si ay u tuuro socdaan, sida zoom ah in search qoraalka ah (by mid ka mid click), Mozilla aragtida badbaadiyey, qiimaynta waa mid aad u wax ku ool ah oo ka mid ah qodob dulqaad in furfuraya masalooyin badan.
Ma heysto wax kasta, laakiin waxa la cabbay inuu ku daro waxa ugu badan ee la qabsaday. Waxay u egtahay aniga Koorsada AutoCAD Command 25 marka ayuu wax ku baray; qalabka dhismaha aasaasiga ah waa dhan (in kastoo macquulka ah qaar ka mid ah in la beddelo) oo ay diiradda saaraan edition 8 laakiin kala duwanaansho amarrada loo baahan yahay sida Copy ka mid ah jiidi fursadaha, firfircoon, isku beddeli iyo qiyaasta dhabanada.
Qoraallada qoraalka, macruufka iyo miiska digista. 3D way u muuqataa mid sahlan, rikoodhuna uma muuqato wax xun, inkastoo ay tahay habka 10 sano ka hor; laakiin wuxuu leeyahay guriyihiisa marka laga soo saaro walxaha ACIS dibadda.
Waxaa jira version ah oo lagu magacaabo EasyCAD US $ 300 iyo 600 US $ FastCAD anda waxa ay taasi ka duwan oo dhaqaale halkii ay shufto, laakiin in my opinion markan dooran lahaa IntelliCAD nooc ka mid ah BitCAD o ProgeCAD ama xataa GstarCAD in xitaa Ribbon ay ku jiraan.
Markaas aqbasho waa version ah in inta uu la casriyeeyay sannadihii la soo dhaafay, ay muuqaallo kale engine waa sannadood tahay 10 isku hor, waxaan u maleynayaa in waxa fiican in marka halxidhkii horumariyo FastCAD 7 ahaa. Taasi waxay abuureysaa xadeyn weyn oo la barbardhigay qalabyada tartame ee dhowaan isticmaalay macaamiisha oo leh mashiinka walxaha ama raadinaysa in la helo isdhexgalka. Qaybta xakamaynta iyo xakamaynta daahfurka waa sida AutoCAD R13 ama Microstation J, si ay u sameeyaan fikrad.
Hoos-u-dhacan hore waxay ka dhigeysaa inta badan ee aan horey u soo sheegnay iyadoo faa'iidooyinka ay sii xumaanayso, wax yar oo wax ku ool ah iyo qofkasta oo aan lahayn sifooyin badan ayaa hoosta ka dhigi kara kartidooda. In Windows 7 waxaa jira dhibaatooyin halis ah oo kaararka qaarkood, gaar ahaan qalabyada Windows 7 ee mashiinada jirtey, sida Windows Vista oo leh ilaha ku saleysan dhirta. Dhammaanba sidii aad u noqotid mashiinka garaafka ah.
Ka dibna waxay leeyihiin nooc ka mid ah madmadowga amarrada maaraysay joogto ah, gaar ahaan inta u dhaxaysa line amarka iyo button saxda ah iyo qaar ka mid ah jadwal in la furo ee Console buluug ah, waxaan u malaynayaa in ay jiraan waa xirfad in qaadataa waqti si ay u fahmaan. Sidoo kale heerka of geynta, layers maamulka ma aha mid aad wax ku ool ah, waqtigan aan maryo badan oo ka qabtaan mid ka mid click noqon deminta, jeestay on ama baraf ma aha oo kaliya file ee isticmaalka laakiin kuwaas oo u jeeday.
Waxaa cad in barnaamijka uu leeyahay arrimaha interoperability, waxa aanu ka akhrisan aan files natively DGN, DXF, billabo laakiin waxaa muhiim in file FCW ah, kaas oo keenaya darrada in aad mar kale dhoofin, gaar ahaan tayada bandhigay in taas oo ah sababta aad u haysato ikhtiyaarka ka faa'iideysanayawaxa aan helayo dhimasho- Si isku mid ah ayay u dhacdaa xaaladaha qaarkood oo leh qoraalka ballaaran ee qoraalka. Waan raadiyey oo ma aanan helin habka lagu ridi karo faylasha raajada ah, oo aan ku xirneyn bakhshiinka, mana ku xirna nidaamyada jajabinta.
Inkasta oo ay ahaayeen kuwo cusub oo ku saabsan maareynta laybarashada daabacada, waxaan u maleynayaa inay hoos u dhac ku tahay xakamaynta xaashiyo badan iyo jiilka pdf u muuqdaan kuwo aan caadi ahayn.
Waa wax la fahmi karo, FastCAD waa qorshaha 2D iyo 3D CAD, waana wax wanaagsan. Laakiin wax intaas ka badan; ma jiraan barnaamijyo dhammaystiran ee injineernimada, dhismaha, GIS ama wax kasta oo kale oo la xidhiidha. Taasi maaha, taasi waa sida ay tahay iyo inta aad ku tidhaahdo "Tani waa FastCAD" ma jiro wax dembi ah, laakiin waxay qaadaysaa faa'iidada maxaa yeelay hadda hadda cidna ma samayso CADadhka saafiga ah laakiin waxay ka dhigan tahay inay isku dubarido macluumaadka edbinta gaarka ah.
Ugu dambeyntii, ma jiraan wax calaamad ah oo ku saabsan qaab cusub; maahan kan Haddii shirkadu ka fekereyso samaynta FastCAD 8, waxay hubaal tahay in ay noqoto horumar cusub (hadda waxa la mid ah in lagu shaqeeyey Visual Basic iyo luqad C ++). Haddii aad rabto in aad tagto mashiinka garaafka ee dhowaan laqaaday waxay ku lug lahaan doontaa in la shaqeynayo .NET iyo ... Ma hubo haddii Riddle ay ka fekereyso taas.
Ugu dambeyntii, casharka lama dhammeeyo haddii aan akhrino Fikradaha Riddle, in barta blogka leh dhowr maroodi ay sii daayaan qaar ka mid ah qirashooyinka u dhexeeya xariiqyada. By reading aan ma ka hortagi kartid muuqdeen kuwo aan laga muraaqooda, qaar ka mid ah impotence ee cadaalad ah software wanaagsan wax baabba'a caan ka hor, waxaana sidoo kale fahamsanahay in Mike halkii isagoo technology ganacsadaha ah waa cusub tuuray gabayaa ah farsamada oo maanta loo baahan yahay maalin ee meesha la tilmaamay.
Waxaan sidoo kale ognahay inay ka dambeyso software cusub, in yar ama ka yar waxaan fahamsanahay nooca, kaas oo ogyahay haddii dib loo cusbooneysiiyo ee FastCAD, oo leh istaraatijiyad istiraatiiji ah oo ka mid ah isbahaysiyada oo hadda aad loogu baahan yahay ka badbaado wax ka badan sanado 10.
My ixtiraamka ninkii dejiyey tilmaamo loogu talagalay habka CAD ee barnaamijyada badani maanta, fikradaha fikradaha ku saabsan malaha aan jirin. Waxay u badan tahay in haddii Riddle uu arkayay waxa uu iibin lahaa, wuxuu ku adkeysan lahaa inuu yahay lataliye AutoDesk ah (inkastoo ay ahayd mid ka mid ah kuwa aasaasay shirkadaha 18) halkii aad ka iibin lahayd alaabtaada oo aad ka maqan tahay waxa hadda la yiraahdo emporium oo dhib ku ah in la iftiimiyo.
Saaxiibka Mareykanka -dharka culus ee kaftanka- Café Colombiano ayaa la ii sheegey galabnimadii in Riddle laga tagay sababtoo ah xiligii Walker uu aasaasay AutoDesk wuxuu iibsanayay sakiin, mana aha inuu googo gooyo ...
AutoDesk Dgn Dwg My aragti ugu horeysay
Post Previous«Previous Ugu fiican ee Zonum ee CAD / GIS
Post Next Google Chrome 30 bilood ka dibNext »
QGIS 3 Casharrada degdega ah
Sidee bay Xanuunada Fog looga caawiyaa xakameynta xaaladaha garoonka?
UAV sawir qaabeynta iyo aasaaska aasaasiga ah ee LIDAR